ပန်းခြံထဲက တစ်နေ့လည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ပန်းခြံထဲက တစ်နေ့လည်
Posted by ကျော်လွင်ဖြိုး on Sep 13, 2014 in Photography | 60 comments
Chinese Garden LANDSCAPES nature တွေ့ရာမြင်ရာ ပုံရိပ် မှတ်တမ်းများ
ကနေ့ သူများ မွေးနေ့ ကို ဝါးတီး မသွားခင်လေး တရုတ်ပန်းခြံ မှာ လက်သွားဆော့လာကြတာတွေပါ ခည။
ဒါတွေက Snapseed နဲ့ HDR ပါးပါးလေး ပုတ်ထားတာ။
1. snapseed HDR
2. snapseed HDR
3. snapseed HDR
ဒီပုံတွေက ဗျိုင်း ငါးဖမ်း တာကို လမ်းကြုံလေး ရိုက်လာတာ။ ဒီ တစ်ခေါက်က တော့ ဗျိုင်းရောက်တာ ငါးတွေ မသိသေးတော့ မပြေးသေးဘူး။ အဲဒီတော့ ဗျိုင်းလဲ သိပ်ကြာကြာ မစောင့်လိုက်ရပါဘူး။
ခဏလဲ နေရော ငါးတွေ ထွက်ပြေးကုန်လို့ ဒီ ဗျိုင်းလဲ ဘယ်လို ဆက်စောင့်စောင့် ငါး ထပ်မမိတော့ဘူး။
10. proud hunter
ဒီ ပုံ ၂ ပုံ က တော့ ငှက်လေး ပျံတာကို ကံကောင်းစွာ မိလိုက်တဲ့ ပုံလေးတွေကို တော်တော်ကြီး crop လုပ်ထားတာ။ (snapseed နဲ့ ကာလာလေး ဘာလေး ပြင်ထားတယ်)
12. bird flying
ပြီးတော့ ပုဇင်း၊ ဒါလေးလဲ ဒီ ပုဇင်း က သဘောကောင်းလွန်းလို့..
အဲ့ဒီ တုတ်တံလေးမှာပဲ လာနားလိုက် ခဏ ထ ပျံပြီး ဒီပဲ လာပြန်နားလိုက် နဲ့
ဒီလောက် ကင်မရာတွေ တချိန်ချိန် နဲ့ နေတာလဲ ဒင်းက ရှိုးမပဲ့ဘူးဗျား။
ကဲ ဒီ နောက်ဆုံး ၂ပုံ က တော့ ပြန်ခါနီးလေး ရိုက်လာတာ။ ဘာမှ တော့ မထူးခြားပါဘူး ရိုးရိုး ရှုခင်းပေါ့။
ကောင်းကင်ကြီး အဲ့လို ပြာနေတာကို သဘောကျလို့။
14. Chinese Garden tower
ပုံလေးတွေ ဘာလိုတယ် ဘယ်လို မျိုး ရိုက်ရင် ပိုကောင်းမယ် ဆိုတာမျိုးလဲ ဝေဖန်ပေးကြပါ ခင်ဗျ။
ကင်မရာ ကို ခလုတ်ပဲ နှိပ်တတ်ပြီး ဘယ်လို ရှုထောင့် ဘယ်လို composition မျိုး က ကောင်းသလဲ ခုထိ မကြည့်တတ်သေးလို့ဘာာာာ
So called Photo Post…
ဒီလိုပဲ ဓာတ်ပုံတွေ ရလာရင် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် မှာ ကိုယ့် ဝေါလ်ပေါ် ကိုယ် တင်လိုက် ဂရု တွေ မှာ တင်လိုက် ဒီမှာ တင်လိုက် နဲ့ ခွတုတ် နေတာ။ ဟိဟိ
ဟွန်း ဒီ ဂျက်​စပဲရိုး ငါ့နယ်​​မြေ​ရောက်​​နေပါလား။ အဲ့ဘက်​ဒါ့ပုံသွားမရိုက်​ဖြစ်​တာကြာ​ပေါ့။ အဲ့ဗျိုင်းလည်းရိုက်​ဖူးတယ်​။သူကကင်​မလာမ​ကြောက်​​ရေးချမ​ကြောက်​ ​မော်​ဒယ်​​တောင်​​လျှောက်​ပြလိုက်​​သေးတယ်​။ တားမြစ်​နယ်​​မြေထဲသွားမရိုက်​ဘူးလား။ အရင်​တစ်​​ခေါက်​ကသူငယ်​ချင်းကိုလိုက်​ကြွားရင်းတားမြစ်​နယ်​​မြေထဲ​ရောက်​သွားတယ်​။ အဲ့ဘက်​မှာအ၀ါ​ရောင်​ကြာပန်း​တွေ့လိုက်​တယ်​။ကင်​မလာပါမသွားလို့မရိုက်​ခဲ့ရဘူး။ အန်​ဒရယ်​ရှိသည်​မ၀င်​ရဆိုပါမှ အဲ့မှာ….
ဘုရား ဘုရား ကြိမ်းဝါးတဲ့ လေသံကြီးက သူ့နယ်မြေထဲ ရောက်လာမှန်း သိရင် ချောင်းရိုက်မယ့် အနေအထားကြီး။
အဲ့ဗျိုင်း ကတော့ လူမခန့်တာများ အနား သွားကပ်ရင်တောင် ဒင်း က ပေစောင်းစောင်း ပြန်ကြည့်သေးတာ။
တားမြစ်နယ်မြေ ဆိုတာတော့ မသိဘူးဗျ။ ဘယ်နားပါလိမ့်။ ဒီ တရုတ်၊ဂျပန် ပန်းခြံ တွေ ကို ၃ ခေါက်ပဲ ရောက်ဖူးသေးတာ။ ရောက်တော့လဲ သိပ် ကို မပတ်ဖြစ်ဘူး။
ဒါနဲ့ ဂျက်စပဲရိုး ဆိုတော့ ဟို အရီး မြစာကလေးနဲ့ ဘာတော်ပါလိမ့်…
တားမြစ်​နယ်​​မြေဆိုတာ အမှန်​​တော့ ´Do not Enter´ လို့​ရေးထားတဲ့​နေရာ​တွေကို​ပြောတာပါ။ အချို့​နေရာ​တွေကပြန်​ပြင်​ရ​တော့မယ်​ အန်​ဒရယ်​ရှိလို့​ရေးထားတာ အဲ့မှာမ​ကြောက်​တဲ့သူ​တွေပုန်း​နေတာ။ ဘွန်​စိုင်းဂါးဒင်း ဘက်​မှာ။ ဘွန်​စိုင်းပင်​​တွေသက်​တမ်းကလည်း ဂျက်​အရိုး​ခေါင်း ဘိုးဘိုး​ခေါ်ရလိမ့်​မယ်​။
အရီးရေ………. အို အရီးရဲ့………..
ဘွန်ဇိုင်း ဂါးဒင်း ကို မရောက်ဖူးသေးဘူး
နောက်တစ်ခေါက်မှ သေချာ ပတ်ဦးမယ် ရေတစ်ပုလင်းနဲ့
အရိုးခေါင်း ဖြစ်သွားပြန်ပြီလား ဟင်င်င်င်င်……
ကိုဂျက်…သတိတော့ထားခင်ဗျ…ပါးချိုင့်နှစ်ဖက်နဲ့အစ်မကြီးက လက်ယဉ်တယ်…ပန်းတွေကိုဒါ့ပုံ ရိုက်တာများ ပြောပါတယ်… များများတင်ပါခင်ဗျ..ပုံ 11 နဲ့ 12 က Screen Saver လုပ်ထားချင်စရာ
ကချင်နုထွားကြီးရေ သတိပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျ။
သူတင်ပဲလား ကျနော်လဲ ဖနောင့်ယဉ် ပါတယ်ဗျ။
ဖနောင့်နဲ့ တင်ပါး တသားထဲ ကျအောင် ပြေးတဲ့နေရာမှာ။
ပုံ ၁၁ နဲ့ ၁၂ က တကယ်တော့ ကံကောင်းလို့ ရသွားတာ။
ငှက် နားနေတာကို ချိန်နေရင်း ဒင်းက ထ ပျံတော့ ဖိုးကပ်စ် မိသွားတာနဲ့ ကြုံသွားတယ် ဟီးဟီး။
ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ နဲ့ဆို ဒါမျိုး ဘယ်ရလိမ့်မတုန်း….. :D :D
ဗျိုင်း ငါးဖမ်းပုံအဆင့်ဆင့်လေးရိုက်ပြသွားတာ သဘောကျမိတယ်လေ
ကျေးဇူးပါဗျ။ ဦးခ ရေ..
အဲ့ ဗျိုင်း အတော်တော့ လှရှာသား သူ့အမွှေး အရောင်လေးတွေ က
ဂျက်​အရိုး​ခေါင်း သနားလို့သတင်း​ပေးလိုက်​ဦးမယ်​. အဲ့မှာ ခိုဒိုမို ဆိုတဲ့ ​ရေကူးတတ်​တဲ့ ​ခြေလက်​ရှည်​တဲ့ ဂျက့်​အမျိူး​တွေရှိတယ်​။ သူနဲ့သူငယ်​ချင်းလုပ်​ထားတယ်​.မ​ကျေနပ်​တဲ့သူရှိရင်​ ကိုက်​ခိုင်းမို့လို့။ သူက နံ့သာဥယျဉ်​ဘက်​မှာကျက်​စားတာ။ ၂​စောင်​ပြိုင်​ဘုံနန်း​နားက​လှေကားကိုကူးလိုက်​ရင်​ အဲ့ဒီနားမှာ အင်​ကြင်းပန်း​တွေရှိတယ်​။
အဲ့ ခိုဒိုမို ဆိုတဲ့ အကောင် ကို မနေ့က ရန်သူ စာရင်း သွင်းထားတာ
စားဖား တစ်ကောင် ကို ကိုက်သွားလို့
နောက်တစ်ခါ တွေ့ ဒင်း ချက်စားခံရမယ် ပြောပေးပါ။ :D
ခိုဒိုမို နဲ့ အပြိုင်​ စားဖား ဖမ်းမို့လား။​ရေငုပ်​တတ်​လို့လား။ ဖွတ်​မိ​ချောင်းဖြစ်​ မြစ်​မချမ်းသာပဲကြားဖူးတယ်​. ဂျက်​မိ​ချောင်းဖြစ်​…..ဘာဖြစ်​မလဲမသိ။
အဲ့မှာ ခိုမိုဒို စားဖား ဖမ်းစားသွားတာမြင်လို့ အနော်တို့လဲ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ဆိုင်မှာ ဖားကြော် (ဖားကင် မဟုတ်ပါ) သွားတွယ်ပလိုက်တယ်။
ဂျက်မိချောင်း ဖြစ်တော့ တစ်ကျွန်းလုံး ဒုက္ခရောက်မယ်သာပြင်
လာခဲ့ အဲ့မိ​ကျောင်း အ​ရေခွံဆုပ်​ပြီး ​ကေဇီ ဘရန်းဒက်​ဆီပို့ပလိုက်​မယ်​။ သား​ရေအိပ်​လုပ်​ဖို့။
ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ် ဖိနပ်ချုပ်ပလိုက်တာ အေးမယ် ထင်တယ်…..
Where??? Where is that crocodile??
I wanna make that skin to handbag..
Kranji နားမှာ ရှိတယ်လေ crocodile farm ဆိုလားပဲ
အဲ့မှာ သွားဖမ်း….. :D :D
လှပသောပုံလေးများ ကို အားကျ စွာ ခံစား သွားပါကြောင်း
ကျေးဇူး တင် သွား ပါ ကြောင်း..
ပုံလေးတွေ အရမ်းလှတယ် မောင်ဂျက်။
ဗျိုင်း ငါးဖမ်း တာကို ရိုက်ဖို့ ဘယ်လောက်စောင့်ခဲ့ရတုန်း။
ဓာတ်ပုံရိုက်တုန်း အိပ်ရိုက် မှောက်ရိုက် ပက်လက်ရိုက် ဘယ်လုံပုံစံနဲ့ ရိုက်ခဲ့ရတုန်း။
6. grab က ရိုက်ချက် အပီဘဲ။ :-)
ဗျိုင်း ငါးဖမ်းတာ ရိုက်ဖို့ မစောင့်လိုက်ရပါဘူးခင်ဗျ။ ငါးမိနစ် ဆယ်မိနစ်ပေါ့။
ဘာလို့လဲဆို ဒီကောင်ကလဲ ကန်ထဲ ဆင်းစ ဆိုတော့ ငါးတွေ တော်တော်များနေသေးတယ်၊ မပြေးကြသေးဘူး။
မတ်တတ်ကနေပဲ ရိုက်တာပါ ခင်ဗျ။
လူမလေးတွေက predator စာရင်းထဲ ပါတယ်လားဟင်….
ဆြာဝန်ပီပီ အမြိုခံလိုက် ဗိုက်ထဲက ပြန်ခွဲထွက်လာလိုက် လုပ်နေပုံ ရတယ်။….
သဘောကျတယ်ဗျို့.. လာလည်ချင်တယ်.. လေယာဉ်လက်မှတ် ပိုးစိုးပက်စက် ဈေးချတဲ့ အချိန်… ဒါတောင် တည်းစရာ အိမ်ကတော့ ဂျက်တို့အိမ်ပဲ တည်းမယ်နော်… ဖြစ်မလား… တခုပဲ အေပရယ်ရုံးပိတ်ရက်ချိန်ရမှာ…
လေယာဉ် လက်မှတ် က တစ်ခါတစ်လေတော့ အသွားအပြန် ကို စလုံး ၁၀၀၊၁၅၀ လောက် ထိ ချတယ် ထင်တယ်။
လျှောက်လည်ဖို့ ရာဘာဖိနပ်(အဟောင်း) တစ်ရန် support လုပ်ပေးပါ့မယ်ခင်ဗျ။
အတည်ပြောရရင်တော့ လာသာ လာပါလေ…. ဝဲလ်ကမ်းဘာာာာ
(ဟို ဂျီးဒေါ် နှစ်ယောက် ရှိနေသားကို..)
ဘူ့ ကို အားကိုးပြီး ဘူတွေကို ဖိတ်နေတာတုန်းး
အို ခေါ်သာ ခေါ်လိုက်ပါလေ။
လင်မယား စုံတွဲလိုက် ရောက်လာမှ ခုတ်ခုတ် ထစ်ထစ် အရေဆုတ်တန်ဆုတ် လုပ်ကြတာပေါ့… ငိငိငိ
တယောက်တော့ သိတယ်.. နောက်တယောက်ကို သိဘူး.. ဘူရဲ… ဇီဇီရယ်.. နောက်တယောက်က ???
လေးလေးကြည် လို့လည်း ခေါ်တယ်။
ဟုတ်.. ဒါဆို စ လုံးမှာ ၃ ယောက်ပေါ့.. အဲလိုလား.. ဂဇက်မန်ဘာလေ…
ကင်မရာကောင်းကောင်း တစ်လုံးလောက် ဝယ်အူးမှပါ …သူများ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေတွေ့ရင် ပိုက်ဆံသုံးချင်စိတ်တွေပေါက် :p:
ပိုက်ဆံ သုံးချင်စိတ်တွေက ကင်မရာကောင်းကောင်း တစ်လုံး လောက် ဝယ်ပြီးမှ ပိုဆိုးလာတာ ခည :'(
lens ဝယ်ဖို့ tripod ဝယ်ဖို့ bag ဝယ်ဖို့ filters ဝယ်ဖို့
အဲ့ဒါတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံပြီး ရှိတာလေးနဲ့ ရိုက်ရတဲ့ ဘွ ရယ်…. :'(
ဂျက်​…သူငယ်​ချင်းလုပ်​ရ​အောင်​…ဟီးဟီး လန့်​စ်​အပို​လေး.ဖစ်​လ်​တာအပို​လေးရှိရင်​ငှါးပါလားဟင်​..မ၀ယ်​နိုင်​လို့ ကင်​မလာနဲပါလာတာပဲသုံး​နေရလို့..:'(
လန်းစ် အပိုတော့ ရှိတယ်။ ငှားပါတယ်ခည။ အနော့် ကင်မလာ က nikon ပါ။
ဖစ်တာ အပိုကတော့ တစ်ခု ကို ၁၀၀ နား ကပ်နေလို့ မဝယ်နိုင်ပါဘူးဂျာ….း(
အဲယိုတော့ ရုတ်နဲ့နော်.. တားတားဒို့က လူရည်သိပ်မလည်ဘူးနော်… ညက်ရုံးရေး တရယ် တရယ် နဲ့.. အားတိုးရာမဲ့တွားမှာ…
ဒါဆို ကျွန်တော် သိသလောက် အကုန် နိုင်ငံခြားမှာချည်းပဲပေါ့နော်.. ကော်မန့်တွေကတော့ ဒါဆို ဘာလို့ ကျွန်တော်နဲ့ အချိန်သိပ်မကွာတဲ့လူတွေထဲမှာ ဇီဇီပဲ တွေ့ရတာလဲ.. ဒါဆို ကျွန်တော် ပြောသလို ဖတ်ပြီး မမန့်တဲ့သူတွေပေါ့နော်..
ရွာထဲ အားအားယားယား ဖလန်းနေတာ အနော် တစ်ယောက်ပဲ မို့။
ကျန်တဲ့ သူတွေက ဖတ်ပါတယ်။
ကွန် ကောင်းတာ မကောင်းတာ ရှိတယ်။
စိတ်ပါတဲ့ အချိန် မပါတဲ့ အချိန်ရှိမယ်။
ကျနော်က မအားလည်း ဝင်ကြည့်ပြီး အရင်ဖတ်ပြီးမှ နောက်မှ ကွန်မန့်လိုက်ပေးဖြစ်တာမို့။
လတ်လျား လတ်လျား လုပ်တာတွေ လူသိကုန်ဘီ။
ကော်မန့်တွေ.. အက်ဒစ်လုပ်လို့.. မရစကောင်း..။
(နောက်ပြီးတကယ်ပြောတာ.. မဟုတ်ဖူးဆိုတာ.. အဟုတ်..)
သူကြီး က ဘယ်​သူ့ကို​ပြောမှန်းမသိ​ရောချသွားတာလား။ လွတ်​လပ်​စွာ​အမြင်​မတူ​ပြောခွင့်​သူကြီးပဲ​ပေးထားတာ​လေ။ ဘက်​မလိုက်​ဘူးလို့ထင်​မှတ်​ထားတဲ့သူကြီးက အဲ့လိုကြီး​ကောက်​ချက်​ဆွဲ​တော့တစ်​မျိုးကြီးပဲ။ ​နော်​က်ြေ​ပာတာလား အတည်​လား။
အဲ.. ရှုပ်ကုန်ပြီ..ကျုပ်က.. ရေမြေ့သနင်းပြည့်ရှင်မင်းကို.. အီးမေးလ်ပြန်ရမှာကို.. ဒီမှာလာပြန်လိုက်တာ..
ဒါပေသိ.. ဂဇက်စိုပြေတိုးတက်ရေးမှာ.. ဇီဇီက စည်းရုံးရေးမှူးးမလား… ဆည်းလည်းလေးဆိုလဲ မမှားဘူး.. ဟုတ်…
ဂလိုပဲ မက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး ကိုယ်ပျော်ရာမှာ ပျော်အောင် ဖန်တီးနေရတာ၊
ဆည်းလည်း မ က ခေါင်းလောင်းဖြစ်နေပြီတဲ့။
ဒီ ခေါင်းလောင်းကြီး နစ်ရင်တော့ ဦးစံလင်းကို မဆယ် ခိုင်းဖို့ မှာခဲ့ဗျဇီ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဦးမိုက်စ် ခင်ဗျားးးး :D
မျက်စိနောက်တာက အခုတင်ထားတဲ့ ပုံကြောင့်ပါ.. ခိ.. ရတုန်း တွယ်ထားမှ… ဦးစံလင်းကလဲ မဆယ်ပါဘူးတဲ့.. နဂါးပိနေလို့တဲ့…
:'( မီးမီး ရဲ့​data usage ကိုတာကုန်​သွားလို့ ရုံးမှာဖွင့်​မရဘူး ​ရေ​မြေ့သနင်းအရှင်​မင်းတြားကြီးရဲ့။ အခုမှအိမ်​​ရောက်​လို့ သုံးလို့ရတာ။ အခုလည်းအား​သေးဘူး စားဖို့လုပ်​ရအုံးမယ်​. :'( ​နောက်​မှလာ​ပြောမယ်​.
ဟုတ်ကဲ့ပါ… အိုင်းရစ်ရယ်… အခုလို ပြောဖော်ရတာပဲ ကျေးဇူးပါ…
တချို့တွေကတော့ လုပ်ကြတယ်.. ရောင်းတန်ရောင်း ပြီး ပြန်ဖို့ …
ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါ ခည….
ထပ်ရိုက်ပါဦးမယ် ဒီနား ခေါင်းလေး ထိုးပေးစမ်းဘာာာာာာ
ဓာတ်ပုံဖရိန်ထဲ မပါမှာ စိုးလို့ဘာာာ
ကပ်​ပိယ ဂျက်​ရှိတယ်​။ သူ့ဘုန်းကြီး​ကျောင်းမှာတည်း။ ​ကေဇီထမင်းဆိုင်​မှာစား။ အန်​တီ က​တော့ အဲ့ဒီပန်းခြံအလကားပို့​ပေးမယ်​​လေ။
မနေ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ အကြွေး အရင် ဆပ်ပါတယ်။
တကယ်ဘဲ အညိုး တော်မား။
ဂယ်ပြယ်တာ သဘောကောင်း ရုပ်ချော မောင်ကလေး တစ်ယောက် ရှိပါတယ်။
သူ့ မာမီ က သင့်တော်ရာရှာပေးပါလို့ နားပူနားဆာတိုက်နေလွန်းလို့။
အရီး လဲ ပြောင်းပြီ။
ဇီကလေး – နာပါတ်ကြီး တွေ နဲ့ နေရတာ ပြင်း လာလို့ ။ ခွေးလွှတ်။ :-)
နို့ပေမယ့် မောင်ကလေး ကိုကတော့ သူ့ဟာသူ သင့်တော်ရာမှာ သင့်တော်သလို နေပါစေ အရီးရယ်..
နေရင်းထိုင်ရင်း မကျိန်းသင့်တာတွေ ကျိန်းကုန်လို့ဘာာာာ
အနော့်မှာလဲ ညီမတွေ အမတွေ မရှိရှာပါဘူး။း)
ဟုတ် တဂျီး.. အခုလို ရှင်းမှပဲ.. မဟုတ်ရင် ကျန်လူတွေပါ သို့လော သို့လော ဖြစ်နေမှာ… ဟီး..
တကယ် မသိလို့ မေးတာပါဗျာ…
မအိုင်းရစ်ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. တကယ်လာဖြစ်ရင်တော့ စကား မမေ့ရဘူးနော်… ဟိုဆရာကြီးရော ဆရာမကြီးရောပေါ့… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ဟောဒီက ရေနည်းငါးလေး လာရင် ကူနော်.. ခုတော့ ပိုက်ပိုက်ကို စာမူရေးရင်း စုလိုက်ဦးမယ်…
အငြိမ်ထက် လှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံတွေကို ပိုသဘောကျမိတယ်..